Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukuntay Ragg lala Xiriirinayo Kamid Ahaashiyaha Al-shabaab – Al-Hurriyah
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukuntay Ragg lala Xiriirinayo Kamid Ahaashiyaha Al-shabaab
Maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan ku riday ragg lala xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-shabaab.
Ciidanka Xoogga Oo Howlgallo Culus Kawada Shabeellaha Dhexe
Madaxweynaha K/galbeed Oo Guddi U Saaray Colaadda Walaweyn
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen…
Maamulka Degmada Marka Oo Ka Warbixiyay Khasaaraha Ka Dhashay Dagaalkii Xalay Halkaasi Ka Dhacay
Guddoomiyaha degmada Marko ee Xarunta Gobolka Sh/hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo la hadlay…
Deg;Deg Xildhibaan ka tirsanaa Hir-shabeelle oo Covid19 ugu geeriyooday muqdisho
Wasiiru dowlihii wasaaradda cadaalada maamulka Hir-shabeelle xildhibaan Khaliif Muumin Ayaa manta Magaalada…
Baarlamanka puntiland oo kalsoonidii kala noqday Dhoobo-Daareed.
Golaha wakiilada puntiland oo kulan kuyeeshay magaalada Garowe ayaa waxaa la hor geeyay maaoshin ka…
Guddi u xilsaarnaa Tirakoobka Shaqaalaha dowladda FS ayaa soo gabagabeeyay howlo la xiriiray…
MOGADISHU. 19 DECEMBER 2019, Howlgal Qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanada Baarsanguuni iyo Kaban oo hoostaga dagmada Jamaame ee gobalka Jubada Hoose ayaa Ciidamadu ku dileen 15 katirsan Kooxda Al Shabaab oo ay ku jiraan…
Wasiirka Warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa si kulul u cambaayeeyay kufsi arxan darra ah oo ka dhacay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellada hoose. Mudane, Maareeye ayaa ficilkaas ku tilmaamay in uu geystay…
Shirka Urur Gobaleedka IGD Oo Ka Furmay Dalka Sudaan
Magalada Khartoum ee Casimada dalka Suudaan ayaa ka furmay shir ay soo abaabuleen oo ay iska kaashanayeen Urur Gobolleed-ka IGAD iyo midowga Europe, kaasi oo ay ka qayb-galayaan Wasiirada arrimaha dibadda ee xubinta ka ah Ururaasi. Shirkani waxaa Soomaalia…
Caiidmada amaanka magaalada boosaaso ayaa miinooyin ka soo saaray bartamaha magaaladaasi kadib maaritaano ciidanku ay sameyeen Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Puntland ee loo yaqaano PSF-ta ayaa la sheegay in miinada koowaad ay ka soo saareen agagaarka…